Uluhlu lolusu: zeziphi, zeziphi kwaye zingakhathalelwa njani | Amadoda aQinisekileyo
Ubume besikhumba (i-epidermis, i-dermis, kunye ne-hypodermis) zenza elona lungu likhulu emzimbeni. Ukubazi kunye nokufunda ukubakhathalele kunemivuzo yobuhle kunye nempilo.
Emva koko, sichaza yintoni uluhlu ngalunye kwaye unokwenza ntoni ukuzigcina usempilweni kwaye ucothe ukuguga:
1 Loluphi ulwahlulo lolusu?
2 Ungayinyamekela njani ulusu
2.1 Zikhusele kwimitha ye-UV
2.2 Sebenzisa imikhwa esempilweni
2.3 Yenza inkqubo yempilo eqinileyo
Loluphi ulwahlulo lolusu?
I-epidermis yindawo yokuqala yolusu, kunye ne-thinnest. Ukongeza ekunikezeleni umqobo okhuselayo, igcina ii-melanocyte, iiseli ezizodwa ezivelisa i-pigment melanin. Ke Yinxalenye apho uxanduva lokuvelisa ithoni yesikhumba ilele khona.
Yahlulwe yangamacandelwana amahlanu. Uluhlu lwangaphandle lwangaphandle luyi-stratum corneum (i-stratum corneum), leyo iqulethe iiseli ezifileyo. Ezinye zisuswa ngokwendalo, ngelixa ezinye zifuna ukusetyenziswa kweemveliso zokucoca. Abanye ababekiweyo zii-stratum lucid (stratum lucidum), stratum granulosa (stratum granulosum), stratum spinosum (stratum spinosum) kunye stratum basalis (stratum basale).
Uluhlu lwesibini lolusu lubizwa ngokuba yidermis. Kuba ihlala i-collagen, i-elastin kunye ne-hyaluronic acid, idlala indima ebalulekileyo ekugcineni ulusu luthambe kwaye lubhetyebhetye. Kufuneka kuqatshelwe ukuba i-dermis iqulethe ii-follicles zeenwele, imithambo yegazi, amadlala aqaqambayo, kunye neervu ezenza ukuba kube lula ukubamba nokubona kushushu nokubanda.
Yeyesithathu kunye neyokugqibela kumaleko esikhumba. Ukuncitshiswa kwethishu yedipose kubangela ukurhawuzelela kunye nemibimbi. Ikwagcina amadlala okubila kwaye unomsebenzi wokugcina ubushushu nokukhusela amalungu abalulekileyo.
Ungayinyamekela njani ulusu
Njengoko iminyaka ihamba, ukudibanisa i-collagen, i-elastin kunye ne-hyaluronic acid iyancipha. Ngokufanayo, kuncitshiswa amanqatha ebusweni. Zonke ezi nkqubo zinokuthinteleka kumaleko ahlukeneyo esikhumba zibangela ukuvela kwemibimbi kunye nokuwohloka. Nangona kunjalo, zininzi izinto onokuzenza ukwenza imibimbi ibe nzima:
Zikhusele kwimitha ye-UV
Ukugcina ulusu lusempilweni ngaphakathi nangaphandle Kubaluleke kakhulu ukuba ungazivezi kakhulu kwimitha ye-UV, njengoko zinokubangela amabala kunye nemibimbi, kunye nomhlaza wolusu ngowona mphumo mbi. Ukongeza ekusebenziseni i-sunscreen nge-SPF 30 okanye ngaphezulu (ngethamsanqa, uninzi lweeyure zokuthambisa zasemini sele zinazo kwiifomula zazo), kukho ezinye iingcebiso ekufuneka zithathelwe ingqalelo. Ayisiyihlobo kuphela, kodwa unyaka wonke:
Ukumboza ulusu lwakho ngempahla xa ungaphandle
Thwala iminqwazi nezibuko zelanga
Gwema iibhedi zokutshisa
Ngakolunye uhlangothi, Ulusu luvelisa ivithamin D ngokwendalo xa ludibana ngqo nemitha yelanga. Vitamin D ithatha inxaxheba kukufakwa calcium emzimbeni. Kukwakholelwa ukuba idlala indima ekuthinteleni izifo ezinje ngesifo sengqondo esixhalabisayo kunye nezinye iintlobo zomhlaza.
Nangona kunjalo, Iidermatologists zicebisa ukufumana ivithamin D ngokutya kunokuvezwa lilanga. I-Salmon, ityhuna, i-yolk yeqanda kunye nama-mushroom ziphakathi kwemithombo yendalo efanelekileyo yesi sondlo Unokufumana idosi yakho yemihla ngemihla yevithamini D ngobisi oluqinileyo kunye neesiriyeli, kunye noncedo lwezongezelelo zesondlo.
Sebenzisa imikhwa esempilweni
Iziphumo zemikhwa ethile zibaluleke ngakumbi kunezinye, kodwa phantse yonke into oyenzayo imini yonke ichaphazela imeko yolusu lwakho. Uqeqesho ubuncinci kathathu ngeveki, ukulala iiyure ezingama-7-8 ngemini, kunye nokutya ukutya okunezakha-mzimba phakathi kwemikhwa eluncedo. Izinto eziyingozi licuba, utywala, ukuhlala phantsi koxinzelelo kunye noxinzelelo.
Ukuba uhlala ubomi obunempilo kwaye ufuna ukuba ulusu lwakho lube lula ngakumbi kwaye lube ne-hydrated, Cinga ukonyusa ubukho be-omega fatty acids kunye ne-antioxidants kwisidlo sakho. Ungayifumana koku kutya kulandelayo:
Intlanzi eluhlaza okwesibhakabhaka
Yenza inkqubo yempilo eqinileyo
Ukucoca kunye nokuhambisa isikhumba yonke imihla kubalulekile. Kubandakanya abacoci, izikhuhluzi, izithambiso zamehlo, Iinyibilikisi, iiserum kunye nezithambisi zomzimba kwindawo yokugcina izilwanyana.
Abahlambululi basusa ukungcola kunye nokwakha i-sebum. Zishiya ulusu lukulungele ukufunxa yonke imveliso yenkqubo yakho yezempilo. Sebenzisa amanzi adikidiki kwaye utshintshe isicoci sakho kwisicoci (emzimbeni okanye kwimichiza) amaxesha amabini ngeveki ukususa iiseli ezihlambulukileyo.
Iikhrim zamehlo zithintela izangqa ezimnyama kunye neenyawo zecry, Olunye lweempawu zokuqala zokwaluphala ebusweni. Nangona amadoda amaninzi etsiba eli nyathelo, inyani kukuba inokwenza umahluko omkhulu xa kufikwa kulusu lobuso kunye nomfanekiso opheleleyo.
Izinto zokuthambisa zinceda ukugcina ulusu luthambile kwaye luqaqambile. Kangangoko kunokwenzeka, zikwalibazisa ukubonakala kweempawu zokwaluphala. Usuku, ubusuku nomzimba zezi ntlobo zintathu zekhrimu ziyimfuneko. Unokongeza enye eyenzelwe ngokukodwa iinyawo ukuba ubona kufanelekile.
Ukufumana i-hydration epheleleyo ebusweni, cinga ukudibanisa i-moisturizer yakho kunye ne-serum. Ngelixa eyokuqala ihlala ikwindawo yolusu lwangaphandle, yomeleza isithintelo sayo esingangeni manzi, iiserum zinokungena nzulu enkosi kulwakhiwo lwazo oluncinci lweemolekyuli.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Uluhlu lwesikhumba
U-Esperanza Sevillano sitsho
Ulwazi olulungileyo kulusu kunye nokuthathela ingqalelo. Kubalulekile ukuba wazi ukuba ulusu "lwenziwe njani" ukuze lukhathalelwe kwaye lukhuselwe. Ndiqhubeka ndikufunda. Konke okugqibelele.
Phendula uEsperanza Sevillano